राष्ट्रिय सम्मेलन माओवादीलाई पुनर्जीवित गर्ने अवसर : गजुरेल- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
राष्ट्रिय सम्मेलन माओवादीलाई पुनर्जीवित गर्ने अवसर : गजुरेल
पुस ८, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रले यही पुस ११–१३ सम्म राजधानीमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । सम्मेलनमा माओवादीले शान्ति प्रक्रियापछि लिएको कार्यदिशाबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने बताएको छ।
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै माओवादीले त्यसपछि सरकार र पार्टी सञ्चालमा भएका त्रुटिबारे समीक्षा गर्न लागेको हो । यसै सन्दर्भमा माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलसँग गरिएको कुराकानी :
राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्देश्य के हो ?
यो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई हामीले पार्टी जीवनको कोसेढुंगाका रूपमा बुझेका छौं । यसबीचमा पार्टी एकता भएर नेकपा बन्यो तर अदालतको कारणले विभाजित हुनुपर्‍यो । त्यसपछि पार्टीलाई विचार, सांगठनिक र राजनीतिक रूपमा पुनर्जीवित गर्ने र नयाँ ढंगले पुनःसंगठित गर्ने यो अवसर हो । हामी अलग हुन चाहेका थिएनौं तर अदालतले गराइदिएपछि त्यसलाई पार्टी निर्माणको चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ भनेर बहस र छलफल सुरु भएको छ । पार्टीलाई नयाँ ढंगले अगाडि लैजाने क्रममा यो राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको हो ।
माओवादी संसदीय व्यवस्थामा सामेल भएयताको समीक्षा कसरी हुन्छ ?
प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले विचारको विकासको दिशामा अगाडि जानुपर्छ भन्नुभयो । यसबीचमा वैचारिक बहस हुन नसकेकाले हामीले विचार विकास गर्न सकेनौं भन्नुभएको थियो । विचारको विकास अभावले पार्टीमा विभिन्न समस्या पनि भए । यसबीचमा पार्टीको टुटफुट र विभाजनमा विचारको विकास नहुनुको कारण पनि जोडिएको छ । त्यसैले यी कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समीक्षा गर्ने भनिएको हो । यो बीचमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति कस्तो रह्यो भन्ने छलफलको कुरा बाँकी छ । अध्यक्षले ती सबै कुरा राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेख्नुहोला र हामीले समीक्षा गर्नेछौं ।
नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भनिएको छ, त्यो कसरी हुन्छ ?
राष्ट्रिय सम्मेलनले विधान परिमार्जन गर्छ । परिमार्जित विधानका आधारमा नेतृत्व चयन हुन्छ । केन्द्रीय सदस्य संख्या बढाउने कि के गर्ने, पदाधिकारी बढाउने कि सानो बनाउने भन्ने कुरा पनि आएका छन् । सांगठनिक संरचना नयाँ ढंगको आएको छ । एउटा व्यक्ति एउटा मात्रै जिम्मेवारीमा रहने भन्ने कुरा आएको छ । यो नयाँ दिशातिर पनि हामीले सोचेका छौं । नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन पनि गर्ने र मूल्यांकन समिति पनि बनाउने भन्ने छ ।
माओवादी र अरू पार्टीमा खासै फरक छैन, यो महाधिवेशनले केचाहिँ नयाँ गर्ला ?
पार्टी बहुपदमा जान मिल्छ । खुला राजनीतिक परिवेशमा आएपछि विभिन्न प्रवृत्तिलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ । अहिले जे अभ्यास भइरहेका छन्, त्यसमा नयाँ विधानको व्यवस्था लागू भइरहेको छैन । विधानमै नयाँ व्यवस्था (चुनावबाट नेतृत्व चयन गर्ने) गरेपछि समस्या हुँदैन । अहिले विधानभन्दा दायाँबायाँ गरेर गतिविधि भइरहेका छन् । महाधिवेशनमा त्यसले अझ ठोस आकार लिन्छ ।
माओवादीले विधानमै निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रावधान राख्न खोजेको हो ?
चुनाव विधिमात्र होइन, मूल्यांकन कमिटी बनाउनुपर्छ भन्ने हो । जनवादी केन्द्रीयता माओवादीमा थियो । अहिले जनवाद कमजोर भयो । एमालेमा जस्ता व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाइरहेका छन्, हाम्रोमा त्यस्तो हुने छैन । अब हाम्रो मूल्यांकन समितिमार्फत केन्द्रीयता व्यक्त हुन्छ र प्रत्यक्ष मतदानमार्फत जनवाद व्यक्त हुन्छ । जनवादी केन्द्रीयताको संयोजन गर्न खोजेका हौं ।
माओवादीमा गुटबन्दी हाबी भएको देखियो नि ?
गुटबन्दी के कारणले भयो भन्ने बहसको विषय हुन्छ । किन हुन्छ र के कारणले सुरु भयो भन्ने हो । अध्यक्ष प्रचण्डले बाबुराम भट्टराई बहिर्गमन भइसकेपछिको पहिलो बैठकमा गुटबन्दी गर्ने भए पार्टी विघटन गरौं भन्नुभएको थियो तर गुटबन्दी त चलिराख्यो । के कारणले गुटबन्दी बढ्छ र यसको अन्त्य गर्ने के उपाय हुन्छ ? कम्युनिस्ट पार्टीमा गुटबन्दी हुन्छ कि हुँदैन ? विचार समूह मात्रै हुन्छ कि गुटबन्दी हुन्छ भन्ने कुराको बहस हुन्छ ।
प्रकाशित : पुस ८, २०७८ ०८:४७
पुस ८, २०७८ जयसिंह महरा
काठमाडौँ — माओवादीले शान्ति प्रक्रियापछि लिएको कार्यदिशाबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै माओवादीले त्यसपछि सरकार र पार्टी सञ्चालमा भएका त्रुटिबारे समीक्षा गर्न लागेको हो ।
‘नयाँ क्रान्तिरकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन’ मूल नाराका साथ आगामी कार्यदिशा तय गर्न लागेको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बुधबार जानकारी दिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यी मूल नारामा केन्द्रित रहेर राजनीतिक दस्ताबेज तयार पारेका छन् । उक्त दस्ताबेज पुस ११–१३ सम्म राजधानीमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नेछन् ।
माओवादीले यसअघि नेता–कार्यकर्ताको कार्यशैली जनताको स्तरसँग मेल नखाएकाले सच्याउने बताए पनि सुधार गर्न सकेको थिएन । २०५२ फागुन १ देखि सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादी २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामार्फत मूलधारको राजनीतिमा सहभागी भएको थियो । त्यसपछि संसदीय निर्वाचन हुँदै सत्ता राजनीतिमा लागेको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भएको संविधानसभा निर्वाचनमा ठूलो दल बनेको माओवादी अहिले तेस्रोमा खुम्चिएको छ । यो अवस्थामा पार्टी कसरी पुग्यो भन्नेबारे राष्ट्रिय सम्मेलनमा समीक्षा हुने भएको छ ।
‘हामी २०६४ सालमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी थियौं, २०७० पछि सानो भयौं र सानो हुँदा, अरू पार्टीसँग सहकार्य गर्दा र संसदीय अभ्यासमा हामीले भोगेका चीजहरूलाई गम्भीर रूपले समीक्षा गर्छौं,’ राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीबारे जानकारी दिन बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महराले भने, ‘हामी २०६४ सालमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी किन भयौं ? त्यसपछि किन सानो भयौं ? हामीले के गर्नुपर्छ ? क्रान्तिकारी बाटोमा केही अवरोधसँग लड्ने बेलामा भएका कमी–कमजोरीबारे हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा बहस गर्नेछौं ।’
माओवादीको अन्तरिम विधानमा मजदुर, किसान र सम्पूर्ण उत्पीडित जाति, भाषा एवं सांस्कृतिक जनसमुदायको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख छ । ‘जनआधारित कार्यकर्ताको पार्टी हो, यो पार्टी सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको अग्रदस्ता हो,’ विधानमा छ, ‘यस पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद हो ।’ एमालेसँग एकीकरण भएपछि उसले माओवाद त्योगेको थियो । ‘पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको निर्माण गर्नु र अन्ततः साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु हो,’ विधानमा छ । पार्टी नेतृत्व र नेताहरू विचलित भएको पार्टीभित्रै आवाज उठ्दै आएको छ । यसबारे पनि समीक्षा हुने महराले बताए । ‘कतै सिद्धान्तबाट विचलित त भएनौं भन्नेमा हामी समीक्षा गर्छौं,’ उनले भने । संस्थागत ढंगले पार्टी सञ्चालन, संगठन निर्माण र राजनीतिको आगामी योजनामा दाहालको प्रतिवेदन केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
विश्लेषक रोकाले भने माओवादी कम्युनिस्ट हो कि होइन भन्नेबारेमा अब समीक्षा हुनुपर्ने बेला भएको बताए । ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लेनिनवादी संगठन संरचनामा यस्ता कुरा हुँदैन, माओवादी त्यस्तो बनाउनेमा गयो । यी सबै कुराले उहाँहरू सुधारवादी हो कि क्रान्तिकारी हो ? उहाँहरू अहिलेको सन्दर्भमा लिबरल डेमोक्र्याट हो कि कम्युनिस्ट हो ? भन्ने प्रश्न बाँकी छ,’ उनले भने ।
महराले सम्मेलनका लागि सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिए । सम्मेलनमा १ हजार ५३३ जना प्रतिनिधि सहभागी हुने उनले बताए । उनले सम्मेलनमा कुनै पनि दलका प्रतिनिधि र विदेशी पाहुनालाई नबोलाउने बताए । ‘यो महाधिवेशन होइन, राष्ट्रिय सम्मेलन भएकाले कुनै पनि पाहुनालाई बोलाउँदैनौं,’ उनले भने ।